တို့ဟူးပေါင်း | Wutyee Food House
« KFC ကြက်ကြော်
October 5, 2011 by chowutyee တို့ဟူးပေါင်း
ငရုတ်သီးမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ တို့ဟူးကို ဓားဖြင့် ၂ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပါ။ ( လှိုင်တွန့်ဓား ရှိပါက ဘေးသားများကို လှိုင်တွန့်များ ဖြစ်အောင် အနည်းငယ် လှီးဖြတ်ပေးပါ။)
၂။ ထို့နောက် ပန်းကန်တစ်ခုထဲ ထည့်၍ ပေါင်းအိုးဖြင့် ၁၅မိနစ်ခန့် မီးများများဖြင့် ပေါင်းပေးထားပါ။
၃။ ပြီမှ ဆော့ရည်အတွက် (ကြက်သွန်ဖြူ၊ ပဲငံပြာရည်၊ နှမ်းဆီ၊ သကြား၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ကြက်သွန်မြိတ်) တို့ကို ခွက်တစ်ခုထဲ ရောမွှေထားပါ။
၄။ တို့ဟူးများ ပေါင်းပြီလျှင် အပေါ်မှ ဆော့များကို လောင်းချပေးပြီ ကြက်သွန်မြိတ်လေးများ ဖြူးပေးလိုက်ပါ။
၅။ အရသာရှိပြီ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်သည့် တို့ဟူးပေါင်းကို စားသုံးနိုင်ပါပြီ…
Posted in ကိုရီယားချက်ပြုတ်နည်း | 17 Comments	17 Responses
on October 5, 2011 at 4:47 am | Reply myattun naing
on October 5, 2011 at 4:51 am | Reply chowutyee
တို့ဟူးဖြူပါ…. တို့ဟူးတွေ Citymart မှာ Bean Curd ဆိုပြီ ၀ယ်လို့ရတယ်။ ဟီးဟီး budget နည်းနည်း ထိခိုက်သွားလို့ ဆော်ရီးနော်။ ၀တ်ရည်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ စမ်းလိုက်၊ ကြွားချင်လို့ ထပ်လုပ်လိုက်နဲ့ …🙂
on October 5, 2011 at 5:30 am | Reply hanlay
on October 6, 2011 at 2:49 am | Reply chowutyee
ဟန်လေး တို့ဟူးက မိန်းခလေးနဲ့ တည့်တယ်။ ကျန်းမာရေးလည်း ညီညွှတ်တယ်… ရှဲရှဲနော်..😀
on October 5, 2011 at 1:46 pm | Reply mgthant
တို့ဟူးပေါင်း ကောင်းမှ ကောင်း
on October 6, 2011 at 2:48 am | Reply chowutyee
on October 6, 2011 at 7:36 am | Reply ma phoo
I like it very much wut yee …
thank u so much naw…
on October 10, 2011 at 6:07 am | Reply chowutyee
on October 6, 2011 at 10:45 am | Reply TTSweet
လာလည်၊ လာကြည့်၊ လာစား … အဲလေ …စားလို့မှမရတာ … သွားရေကျ ပြန်သွားပါတယ်။
တို့ဟူး (ပဲပြား)တော့ ကြိုက်ပါတယ်။ မစားဖူးတော့ ဘယ်လို အရသာမှန်းမသိဘူး။ ဒီမှာ ပဲပြားလဲ ဈေးကြီးသဗျ။
on October 10, 2011 at 6:09 am | Reply chowutyee
စားလို့ အရမ်းကောင်းပ်ါတယ်.. အားရင် ချက်စားကြည့်ပါ..
on October 8, 2011 at 4:43 am | Reply khin
you are very clever.့့please let me know the method of chichen leg noodle.
Thanks! I will post this recipe later!!😀
on December 21, 2011 at 2:39 am | Reply shaheda
တို့ဟူးက အ၀ါရောင်နဲ့ လုပ်လို့ ရမလား အမ…အဖြူကို မတွေ့ဖူးဘူး အမေ….
on December 30, 2011 at 5:01 pm | Reply chowutyee
တို့ဟူး အဖြူ မတွေ့လည်း ပဲပြားနဲ့ လုပ်လို့ရပါတယ် ညီမ..🙂
on December 21, 2011 at 2:40 am | Reply shaheda
အဖြူရောင်ကို မတွေဖူးဘူးလို့ အမ..
U can find at City Mart, sis !:)
on February 24, 2014 at 4:53 am | Reply ei mon